ဥရောပဗဟိုဘဏ်၏အတိုးနှုန်း ဆုံးဖြတ်ချက် ဆွေးနွေးပွဲကို ၀၂:၄၅ MT ညနေအချိန်တွင် ထုတ်ပြန်သွားဖို့ ရှိပါသည်. ဘဏ်အတိုးနှုန်းကိုမပြောင်းဘဲထားဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီး ဒီနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းအထိ အစိုးရငွေတိုက်စာချုပ်တွေကို ဆက်လက်ဝယ်ယူသွားမယ်လို့လဲ ကတိပြုပြောကြားသွားပါတယ်. ငွေတိုက်စာချုပ်တွေကိုဝယ်ယူမှု တိုးတက်လာတာကတော့ ယူရိုငွေကြေးတန်ဖိုးကို မြင့်တက်လာစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်. ထို့ပြင် ၀၂:၄၅ MT ညနေတွင်လဲ ဥရောပ၏ဗဟိုဘဏ်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်ဖို့ရှိနေပါတယ်. ဥရောပ ဗဟိုဘဏ်အကြီးအကဲ Mario Draghi ရဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ဗဟိုဘဏ်၏ငွေကြေးဆိုင်ရာမူဝါဒများကိုဖြေလျှော့ပေး မပေးဆိုတာကို အရိပ်အမြွက်သိရဖို့ အတွက် ထိုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအရောင်းအ၀ယ်သမားများကစောင့်ကြည့်နေကြပါသည်. Mario Draghi ရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်တိုင်းယူရိုငွေကြေးသည်များစွာလှုပ်ခတ်လေ့ရှိပါသည်. EURနှင့်တွဲထားသောအခြားငွေကြေးအတွဲတွေအားလုံးအပေါ် သက်ရောက်မှုပြင်းသော ဒေတာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. အမြတ်ငွေရအောင်လုပ်ဆောင်လိုက်ပါ.